ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းပါ ရှစ်ဦးကို နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထု?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃-ဖြိုးကိုကို တင့်ဆန်းပါရှစ်ဦးအား နေပြည် တော် ဒက္ခိဏခရိုင် တရားရုံးတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး ရာ ဇဝတ်ကြီးမှုသုံးမှုအပါအဝင် အမှု လေးမှုကို ထပ်မံတရားစွဲတင်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် နံနက်ပိုင်း က နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏခရိုင် တရားရုံးသို့ ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း အပါအဝင် စွပ်စွဲခံရှစ်ဦးအား ပထမ ဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး ရာဇဝတ် ကြီးမှုသုံးမှုဖြစ်သည့် ပို့ကုန်သွင်း ကုန်ပုဒ်မ-၈ တစ်မှု၊ ဆက်သွယ် ရေးဥပဒေပုဒ်မ-၆၇ နှစ်မှုနှင့် တရားခံပြေးတစ်မှုတို့ကို ထပ်မံ တရားစွဲတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှ ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး ဦးခင် မောင်ထွေးက ”ဒီနေ့ရာဇဝတ်ကြီး မှုသုံးမှုရယ်၊ တရားခံပြေးတစ်မှု ရယ်စွဲတင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီ မှာ ရဲကနေ တရားစွဲတင်တာလက် ခံတာပဲရှိနေတယ်။ အားလုံး ရာ ဇဝတ်ကြီးမှုရှစ်မှုရယ်၊ တရားခံပြေး နှစ်မှု ဒါပဲရှိသေးတယ်”ဟု ဇန်နဝါ ရီ ၃ ရက်ညနေပိုင်းက မီဒီယာများ ၏မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့သည်။
ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းအမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင် ဘာ ၂၁ ရက်က ဒက္ခိဏခရိုင် တရားရုံးသို့ မူးယစ်မှု၊ လက်နက်မှု နှင့် နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံ ဆိပ်အမှုတို့ပါဝင်သည့် ရာဇဝတ် ကြီးမှုငါးမှုနှင့် တရားခံပြေးတစ်မှု တို့ကိုတရားစွဲတင်ခဲ့ပြီးဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှ ရဲ အရာရှိတစ်ဦးက ”ဖြိုးကိုကိုတင့် ဆန်းပါရှစ်ဦးကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ်ခဲ့တာပါ။ ရာဇဝတ်ကြီးမှု သုံးမှုနဲ့ တရားခံပြေးတစ်မှုကို တရား စွဲတင်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့က ထပ်မံ တရားစွဲတင်ခဲ့တာ။ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တုန်းကလည်း အမှုတော် တော်များများကို တရားစွဲပြီးသွား ပြီ”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇန် နဝါရီ ၃ ရက်က ပြောသည်။
နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏခရိုင် တရားရုံးတွင်တရားစွဲတင်ထား သည့် အမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း စစ် ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒက္ခိဏ ခရိုင်တရားရုံးမှ ဒုတိယခရိုင်တရား သူကြီး ဦးခင်မောင်ထွေးက မီဒီ ယာများကို ပြောသည်။
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၅ ရက်ညပိုင်းက နေပြည်တော် လေဆိပ်တွင် ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း အပါအဝင်သုံးဦးကို ¤င်းတို့ထံမှ ပစ္စတိုနှစ်လက်နှင့် ကျည်ဆန်များ၊ စိတ်ြ<ွကဆေးပြားများ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နောက် ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော် ရှိ ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းပိုင် ACE ကုမ္ပဏီတို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း၊ အမှုတွင် ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းအပါ အဝင် ကွင်းဆက်တရားခံ ၁၅ ဦး နှင့် လက်နက် ၂၄ လက် ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ပြီး နေပြည်တော်တွင် အမှု ၁ဝ မှု၊ ရန်ကုန်တွင် အမှုခုနစ်မှု စုစု ပေါင်း ၁၇ မှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထား ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ထံမှ သိရသည်။
WYHW, MP, DemocracyToday
“My Golden Life” ဇာတ်လမ်းတွဲကို အပိုင်း ထပ်တိုးမည့်အပြင် ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ကြောင့် အချိန်ရွှေ့ဆိုင်??